Miara-misakafo amin’ny ben’ny tanana ny Kazakhs bilaogera sasany, ny hafa kosa ampidirina am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2019 8:26 GMT
Ben’ny tanana ao Almaty sy ireo bilaogera notsongaina Kazakh, 5 Febroary 2014. Sary avy amin'ny @evlaman, nahazoana alalana.
Nanameloka bilaogera telo higadra 10 andro tany am-ponja ny fitsarana any Kazakhstan noho ny fiampangana ho nanao « hagaigena bitika ». Nosamborin’ny polisy teo ivelan'ny trano fisakafoanana iray tao Almaty i Nurali Aitelenov, Rinat Kibraev ary Dmitry Shchyolokov, izay toerana nihaonan'ny ben’ny tanandehibe, Akhmetzhan Esimov tamin'ireo bilaogera notsongaina ny 5 Febroary 2014. Tsy navela niditra ny trano fisakafoanana ireo tovolahy telo satria tsy voaasa hanatrika ny fihaonana izy ireo. Tsy navela naka sary ny trano fisakafoana ihany koa izy ireo. Nosamborin’ny polisy ireo bilaogera telo ireo taorian’ny nanehoany ny sora-baventy milaza hoe “Ireo bilaogera voafehy ihany no hiresahan'i Esimov” sy ny hoe “Esimov ! Mivoaha”.
‘Bilaogera manao kolikoly’
Nampizarazara ny vondrom-piarahamonin’ireo bilaogera Kazakhs ny fihaonana tamin’ny ben’ny tanana. Niampanga ireo bilaogera nasaina ho « nandray vola » sy « nanao kolikoly» ireo izay tsy nahazo fanasana tamin’ilay fotoana. Nisioka andro iray talohan’ny fihaonana ny iray tamin’ireo olona voatana :
Rahampitso any amin’ny sakafo atoandro miaraka amin'i Esimov…[Mivaky hoe : “Ry bilaogera mpanao kolikoly”] ny lahatsoratra eo ambanin’ny sarin’i Esimov.
Fotoana fohy talohan’ny nisamborana azy, nisioka ity sary ity i Aitelenov :
fihetsiketsehana manohitra ireo bilaogera mpanao kolikoly.
Mpiseran'ny tambajotra sosialy marobe no nahita izany ho hafahafa fa ireo bilaogera izay nitsikera matetika ny ben’ny tananan’i Almaty matetika no niara-nisakafo taminy tao amin’ny iray amin’ireo trano fisakafoanana lafo indrindra tao an-tanàndehibe izay voalaza fa izy no nandoa ny lany .
Manantena aho fa fara faharatsiny mba namoaka vola am-paosy ary nandoa ny sakafony ny sasany tamin’ireo bilaogera nanatrika ny fiaraha-misakafo atoandro niaraka tamin’i Esimov?
Nandika ny fihaonana ho tetika ninian’ny ben’ny tanana natao mba hanasaratsarahana ny vondrom-piarahamonin’ireo bilaogera sy mba hanatsarana ny sariny manokana ny mpisera Aterineto sasany.
Fihetsika fetsy nataon'ny [ben’ny tanana] : tsy te-hifampiresaka ireo bilaogera raha tsy tonga any amin’ny fihaonana . Nandray kolikoly izy ireo raha tonga any .
Nilaza ilay bilaogera Ernar Prediktor fa mihevitra ireo bilaogera ho “marina sy mahaleotena” ny vahoaka Kazakh. Nanazava izy fa anisan’ny fanentanana momba ny seraseram-bahoaka ataon’ny ben’ny tanànan’i Almaty ny fihaonana niaraka tamin’ireo bilaogera “tsy malaza na fanta-bahoaka indrindra”:
Nampiasaina ianareo ry zalahy. Nampiasan'izy ireo teo imasom-bahoaka ny endriky ny bilaogera ho tombontsoan’izy ireo manokana. Ankehitriny, hilaza eny rehetra eny izy ireo fa tsara sady demaokraty ny ben’ny tanana, fa nihaona mora foana tamin'ny solotenan’ny mponina ao Almaty izy ary niara-namaha ny olana naraka tamin'izy ireo, sns.
Saingy nihevitra ireo izay nanatrika ny fihaonana sy ireo sasany tamin'ireo mpanjohy azy ireo tao amin’ny tranonkalan’ny tambajotra sosialy fa nilaina ny fihaonana.
Raha nitsara ny fihaonana tamin’ireo bilaogera niaraka tamin’i Esimov, nahavariana izy ary niara niombom-po tamin’izy ireo.
Namaly ireo tsikera ihany koa ireo bilaogera taorian’ny fihaonana.
Aza manjohy ahy intsony ianareo olona mihevitra fa miankina amin’ny olona izay mandoa ny vola ao amin’ny trano fisakafoanana ny hirika hifanakalozan-kevitra mampandroso sy ny hiresahana olana.
Vao haingana izy ireo no nitaraina fa tsy nahazo an'i Esimov ; Ankehitriny nanozona izay tao an-toerana ireo izay tsy tany amin'ny fihaonana niaraka taminy. Toetra mampiavaka ny Kazakhs.
Nandrakitra an-tsoratra eto ny adihevitra an-tserasera nifandraika tamin’ny fihaonan'ny ben’ny tanàna tao Almaty niaraka tamin’ireo bilaogera ilay bilaogera Samson.